Wararka Xanta Suuqa Kala Iibsiga: Chelsea Oo Heli Karta Emerson Palmieri, Xidiga Kaio Jorge Oo Ac Milan Ku Biira Kara Iyo Qodob Kale
HomeSuuqa kala iibsigaWararka Xanta Suuqa kala iibsiga: Chelsea oo heli karta Emerson Palmieri, Xidiga Kaio Jorge oo Ac Milan ku biira kara iyo Qodob kale
March 15, 2021 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Wargeysyada 0
Qeybta Danbe Suuqa kala iibsiga 15 Maarso
Chelsea ayaa dooneysa ugu yaraan bixinta 20m euros (£ 17m) si ay u hesho daafaca Talyaaniga Emerson Palmieri, iyadoo Inter Milan iyo Napoli ay xiiseynayaan saxiixa 26 jirkaan. Calciomercato
qadka dhexe ee reer England Jesse Lingard, 32 jirka reer Spain Juan Mata, 21 jirka daafaca reer Portugal Diogo Dalot iyo daafaca Ingariiska Phil Jones, 29, si loogu daro. miisaaniyadiisa summer 80m xagaaga. Metro
Barcelona ayaa ku sii dhawaaneysa heshiiska ay kula soo saxiixaneyso weeraryahanka Manchester City Sergio Aguero laakiin 32 jirkaan oo si bilaash ah ku yimid xagaaga ayaa ku xirnaan doonta in kooxda ka dhisan Nou Camp ay ku qancin karto weeraryahanka kale ee reer Argentina Lionel Messi, oo 33 jir ah, inuu la joogo AS
Arsenal ayaan dooneynin inay amaah ku dirto xagaagan Gabriel Martinelli, sida ay qortay The Athletic.
Arsenal ayaa ah, ayaa hogaamineysa baacsiga loogu jiro daafaca Eintracht Frankfurt Express.
Liverpool ayaa diyaar u ah inay lacag kaash ah ku hesho weeraryahan aan booska ka haysan kooxda ee Divock Origi – sida ay qortay Daily Mail .
Pep Guardiola ayaa u hanqal taagaya Manchester City inay lasoo saxiixato xiddiga Sporting CP Nuno Mendes – sida laga soo xigtay AS .
Thomas Tuchel ayaa ku adkeysanaya inuusan ku riyooneyn in weeraryahan cusub uu yimaado Chelsea xagaaga, waxaana uu rumeysan yahay in diirada la saarayo waxyaabaha aasaasiga ah ay hubin karto in xiddigaha haatan ee kooxda Hormar sameeyaan Goal
Qeybta hore Suuqa kala iibsiga 15 Maarso
AC Milan ayaa u dhaqaaqi doonta saxiixa Santos Kaio Jorge marka lagaaro 2022 marka uu qandaraaskiisu dhamaado ESPN .
Real Madrid ayaa dooneysa bedelka Luka Modric waxayna aaminsan yihiin in Sergej Milinković-Savic uu yahay ninka ay u baahan yihiin sida ay qortay Don Balon .
Chelsea iyo Manchester United ayaa doonaya saxiixa Eduardo Camavinga oo ay kala soo wareegaan kooxda Rennes, sida laga soo xigtay AS .
PSG ayaa diyaar u ah inay qaado istiraatiijiyad hoose oo ay ku baacsato Lionel Messi ka dib markii ay ku jahwareertay ciyaaryahanka reer Argentina isbuucyadii la soo dhaafay. Journal du Dimanche .
Tababaraha kooxda Barcelona Ronald Koeman ayaa mudnaanta koowaad ee xagaaga ka dhigtay laacibka kooxda Marseille ee Boubacar Kamara, sida ay qortay Todo Fichajes .
Marseille ayaan wali ka quusan inay heshiis cusub ka saxiixdo Florian Thauvin, sida ay qortay Sport Mediaset .